orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု attenuating ရှိနေသော်လည်း locomotor ာင်း potentiates (2009) - ။ Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
comments: လေ့လာမှုကြောင်း DelatFosB cand အကြောင်းမရှိပြသ နှစ်ခုလုံး အာရုံခံစားမှုနှင့် desensitization (သည်းခံစိတ်) ။
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009 စက်တင်ဘာ; 93 (3): 278-84 ။ EPub 2008 ဒီဇင်ဘာ 16 ။
Winstanley, CA, အစိမ်းရောင်က TA, Theobald DE, Renthal W က, LaPlant မေး, DiLeone RJ, Chakravarty S က, Nestler EJ ။
စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာ 5323 ဟယ်ရီ Hines က Boulevard, Dallas မြို့, တက္ကဆပ် 75390-9070, အမေရိကန်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အဆိုပါသက်ရောက်မှုများ စွဲလမ်းစေ မူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်ခါတလဲလဲသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကိုပြောင်းလဲ: အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ပျြောမှေ့စဆိုးကျိုးများ၏ဒဏ်ခံဒါပေမယ့်လည်းအနုတ်လက္ခဏာ sequelae (ဥပမာ, စိုးရိမ်စိတ်, လီယံနှင့်မူးယစ်ဆေးတဏှာ) ကိုပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံစိတ်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံသည့်ယန္တယားကိုနားလည်ခြင်းမူးယစ်ဆေးမှီခို၏အခြေခံသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုင်ပြီး စှဲမွဲမှု။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် Impulse ကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ကင်းတစ်ဦးစူးရှသောဆေးထိုးများ၏စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကပိုပြီးထကြွလွယ်သောဖြစ်လာသည်။ ငါတို့သည်လည်းကင်း၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် orbitofrontal cortex (OFC) အတွက်ကူးယူအချက် DeltaFosB ၏စကားရပ်တိုးပွါးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းမှတဆင့် OFC DeltaFosB ၌ဤမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်မြင့်နည်းနဲ့အတုခိုးသည်ဤအပြုအမူအပြောင်းအလဲများအတုယူ: OFC အတွက် Over-စကားရပ် DeltaFosB တစ်ခုစူးရှသောကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု၏သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ် induces ပေမယ့်ဆုတ်ခွာ၏သိမြင်မှု sequelae မှကြွက်များ sensitizes။ ဤတွင်ကျနော်တို့က OFC အတွက် DeltaFosB တိုးမြှင့်လည်းကင်း၏ locomotor-လှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများမှတိရိစ္ဆာန်များ sensitizes ကြောင်းသရုပ်ပြဝတ္ထုဒေတာသတင်းပို့ပါ။ တစ်ဦးကနျူကလိယ၏ nalysis OFC အတွက် DeltaFosB အတွက် Over- ဖော်ပြ DeltaFosB ကြွက်များထံမှတစ်ရှူး accumbens နှင့်ဆားသို့မဟုတ်ကိုကင်းနှင့်အတူတာရှည်ကုသ, မတိုးမြှင့် OFC DeltaFosB တိုးမြှင့်သည့်နျူကလိယ accumbens မှတဆင့် sensitization potentiates သောအယူအဆထောက်ခံမှုမပေးပါဘူး။ ဤကိန်းဂဏန်းများအရကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများစွာကိုသည်းခံနိုင်စွမ်းနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုနှစ်မျိုးလုံးသည်တူညီသော ဦး နှောက်ဒေသတစ်ခုတည်းအတွင်းရှိဇီဝဗေဒဆိုင်ရာယန္တရားမှတဆင့်အပြိုင်သွေးဆောင်နိုင်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုအပြောင်းအလဲများသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ မျိုးစုံရှုထောင့်၌တည်၏ စှဲမွဲမှု.
Tသူကမူးယစ်ဆေးစွဲအကြောင်းကိုလက်ရှိသီအိုရီ၏စိတ်နှလုံးမှာသည်းခံစိတ်အရေးကြီးတဲ့မုသား၏ဖြစ်ရပ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရောဂါများအတွက် Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (American Psychiatric Association DSM IV) စံ (1994) ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ key ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူကိုမူးယစ်ဆေးများပျြောမှေ့စဆိုးကျိုးများမှဒဏ်ခံဖြစ်လာကြောင်းနှင့်အတူတူပင်အောင်မြင်ရန်ပိုမိုမူးယစ်ဆေးလိုအပ်ပါတယ် "မြင့်မားတဲ့" ။ သို့သော်သည်းခံစိတ်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမြင့်လာအဖြစ်ဆိုးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲဖို့ဦးဆောင်နေတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့သက်ရောက်မှုအားလုံးကိုတန်းတူ Rapid နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပါဘူး။ နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုလည်းမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုတခြားရှုထောင့်မှထိခိုက်ထက်ဒဏ်ခံဖြစ်လာသည်။ မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမှရရှိသောအပျော်အပါးတဖြည်းဖြည်းမူးယစ်ဆေးဝါးတိုးယူဖို့အလိုဆန္ဒမှေးမှိန်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပေါ်ဖို့ (ဥပမာ, စိုးရိမ်စိတ်, လီယံ) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မူးယစ်ဆေး-တွဲတွေကိုပါဝါမှမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများကိုမှ sensitize သော်လည်း အပြုအမူ -craving နှင့် -seeking (Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးထိခိုက်မခံတဲ့နဲ့သည်းခံစိတ်ကျောထောက်နောက်ခံဇီဝယန္တရားများကိုနားလည်မှတဆင့်ပြုလုပ်နည်းလမ်းတွေစွဲ၏ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ပြန်လှည်သို့မဟုတ်တားစီးတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
ရလဒ်အဖြစ် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းပြင်းထန်စွာသုတေသနပြုထားသည်အထူးသဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင် (တွေ့မြင် (ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997)) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တူ Psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်။ ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်, ဒီတုန့်ပြန် sensitized ဖြစ်နှင့်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုစူးရှသောမူးယစ်ဆေးစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်သိသိသာသာပိုပြီး hyperactive ဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာယခုကောင်းမွန်စွာထူထောင်ကြောင်း locomotor ာင်း CR ဖြစ်ပါသည်itically dopaminergic နှင့် glutamatergic အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများအပေါ်မူတည် နျူကလီးယပ် accumbens (NAc) အတွင်း (တွေ့မြင် (Kalivas နှင့် Stewart က, 1991; Karler et al ။ , 1994; ဝံပုလွေ, 1998) ။ မော်လီကျူးအချက်ပြပရိုတိန်း၏တစ်ဦးကကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်လည်းဒီထိခိုက်မော်တာတုံ့ပြန်မှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရသောဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောပရိုတိန်းနာတာရှည်ပြီးနောက် NAc နှင့် dorsal striatum အတွက်တိုးလာပေမယ့်စူးရှသောမ, မြောက်မြားစွာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (၏အုပ်ချုပ်မှုသောကူးယူအချက်ΔFosBဖြစ်ပါသည်Nestler, 2008) ။ ငါΔFosB၏ NAc အဆင့်ဆင့် ncreasing, ကိုကင်းဖို့ locomotor ာင်းတိုးပွါးမူးယစ်ဆေးမှ conditional ရာအရပျ preference ကိုတိုးပွါးနှင့်လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (Colby et al ။ , 2003; Kelz et al ။ , 1999). ဒါဟာထို့ကြောင့် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction အဆိုပါစွဲပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ပို. ပို. စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တူသော Higher-အလို့ငှာသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိခိုက်စေသော, ဤမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံ (ရန် relapse အပေါ်တစ်ဦးအလွန်အရေးပါသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုBechara, 2005; Garavan နှင့် Hester, 2007; Jentsch နှင့်တေလာ, 1999) ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှုမကြာသေးမီက abstinent ကိုကင်းစွဲလေ့လာခဲ့ကြသကဲ့သို့အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ (၏အသုံးပြုသူများသည်Hanson et al ။ , 2008; Lejuez et al ။ , 2005; Moeller et al ။ , 2005; Verdejo-Garcia က et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာ (ထိုကဲ့သို့သောလူဦးရေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိဒီ Impulse အဆိုပါ orbitofrontal cortex (OFC) တွင် hypoactivity ကနေအဓိကအားထားကြောင်း hypothesised ထားပြီးKalivas နှင့် Volkow, 2005; ရော်ဂျာ et al ။ , 1999; Schoenbaum et al ။ , 2006; Volkow နှင့်မုဆိုး, 2000) ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် OFC အတွင်းΔFosB၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကြောင်းကို၎င်း OFC (ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်း) သို့ကူး-အမြန်ΔFosBဖို့ဒီဇိုင်း adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) infusing ဖွငျ့ဤ induction န်းမှာဒေသခံ inhibitory ကိုသက်ဝင်မှပေါ်လာသောလေ့လာတွေ့ရှိ ဆားကစ် (Winstanley et al ။ , 2007) ။ OFC ΔFosB၏မြင့်မားသောကြောင့်, သီအိုရီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအထောက်အကူပြုပေမည်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့နှင့်ကြွက်များတွင် Impulse နှစ်ခုအစီအမံအပေါ်ကိုကင်း၏စူးရှသောနှင့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများတစ်စီးရီးပြီးစီးခဲ့: အချိန်မတန်၏အဆင့် (ထကြွလွယ်သော) ကိုငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်တုံ့ပြန် ( 5CSRT) နှင့်တစ်ဦးနှောင့်နှေး-ဝတာဝန် (ထဲမှာပိုကြီးတဲ့နှောင့်နှေးဆုလာဘ်ကျော်ငယ်လေးတစ်ချက်ချင်း၏ရွေးချယ်ရေးWinstanley et al ။ , 2007) ။ ကျနော်တို့သေးစိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုန်းမှာ, နှောင့်နှေး-လျှော့ပါရာဒိုင်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ချက်ချင်းဆုလာဘ်များထကြွလွယ်သောရှေးခယျြမှုလျော့နည်းသွားစူးရှသောကိုကင်းသည့် 5CSRT အပေါ်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောတိုးပွားလာကြောင်းလေ့လာသည်။ ထကြွလွယ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုထဲမှာအပြုအမူ-တစ်ခုတိုးလာ၏ဤပုံစံသေးထကြွလွယ်သောတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း (အကျိုးသည်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ရွေးချယ်မှု-ဖြစ်ပါတယ်Uslaner နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2006) ။ သူတို့ကမူးယစ်ဆေးဤသိမြင်သက်ရောက်မှုမှဒဏ်ခံဖြစ်လာလျှင်အဖြစ်သို့သော်ကင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်, ကြွက်များမရှိတော့, Impulse ထိုသို့သောသိသာသောအပြောင်းအလဲပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိကင်းဖို့ထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုမှကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဆနျ့ကငျြဘ၌တည်ရှိ၏။ ထို့အပွငျ Over-စကားရပ်ΔFosB၏ OFC အတွက်နာတာရှည်ကင်းကုသမှု၏သက်ရောက်မှု mimicked: သူတို့ထားပြီးမူးယစ်ဆေးမှသည်းခံစိတ်တီထွင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိုင်း 5CSRT နှင့်နှောင့်နှေး-ဝတာဝန်များကိုနှစ်ဦးစလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စူးရှသောကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ, ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် attenuated ခဲ့သည် '' ဆိုးကျိုးများ။
အဆိုပါ OFC အတွက်တိုးပွားလာΔFosBတိုးပွားလာ Impulse ထံမှစူးရှသောကိုကင်းတားဆီးနေစဉ်သို့သော်, ဤတူညီသောကိုင်တွယ်အမှန်တကယ်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Impulse တိုးလာ ရှည်လျားသော-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစစ်အစိုးရအနေဖြင့် (Winstanley et al ။ , 2008) ။ ကိုကင်း On-board ကိုအခါဒီတိရစ္ဆာန်၏သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထို့ကြောင့်လျော့နည်းထိခိုက်နစ်နာခဲ့သေးသူတို့ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှု impulse ဖို့ပိုအားနည်းချက်ရှိကြ၏။ အလားတူကိုင်တွယ်-တိုးပွားလာΔFosBထဲမှာထို့ကြောင့်ကင်းရဲ့သက်ရောက်မှု၏ရှုထောင့်မှသည်းခံစိတ်သို့မဟုတ် sensitivity ကိုတိုးမြှင့် OFC-နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့က OFC အတွက် Over-စကားရပ်ΔFosB၏အောက်ပါ Impulse စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစူးရှသောကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုတုံးတုန့်ပြန်ပြသပေးသောတိရိစ္ဆာန်များလည်းကင်း၏ locomotor လှုံ့ဆော်လုပ်ရပ်များမှ sensitized ခဲ့ဖေါ်ပြခြင်းဝတ္ထုအပိုဆောင်းဒေတာသတင်းပို့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကင်းရဲ့သက်ရောက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှသည်းခံစိတ်အရေးကြီးတဲ့အတူတူဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ locomotor ာင်းဖြန်ဖြေနှင့်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းမော်တာစည်းမျဉ်းထဲမှာ OFC implicating အတွက် NAc ၏သိသာအခန်းကဏ္ဍပေးထားကျနော်တို့ OFC အတွက်ΔFosBတိုးမြှင့်ဒီ striatal ဒေသတွင်း၌ function ကိုပြောင်းလဲမှတဆင့်ကင်းဖို့မော်တာတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ကြစေခြင်းငှါ hypothesised ။ ကျနော်တို့ထို့ကြောင့် OFC အတွက်ΔFosBတိုးပွားလာ locomotor ာင်းတိုးမြှင့်၏ညွှန်ပြမယ့်ထုံးစံအတွက် NAc အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Real-time PCR သုံးပြီးသီးခြားစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက် NIH လမ်းညွှန်နှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်များနှင့် UT အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အထီး Long ကအီဗန်ကြွက် (ကနဦးအလေးချိန်: 275-300 ပါ g; ချားလ်စ်မြစ်, Kingston, RI က) တစ်ဦးရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသောကိုလိုနီခန်းထဲမှာ (21.00-09.00 ကနေအပေါ်ထွန်း) ကပြောင်းပြန်အလင်းသံသရာအောက်မှာအားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်တိရစ္ဆာန်များ (n= 84) အစားအစာသူတို့ရဲ့အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှုအလေးချိန်၏ 85% အထိကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့လျှင်ကြွက် Chow ၏ 14 ဆအပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ရေမရရှိနိုင်ခဲ့ ကြော်ငြာ libitum။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း 09.00 နှင့် 19.00 အကြားတစ်ပတ်လျှင်ငါးရက်ရာအရပျကိုယူ။ အဆိုပါ qPCR စမ်းသပ်ချက်အဘို့အဦးနှောက်တစ်သျှူး generate ဖို့အသုံးပြုတိရစ္ဆာန်များ (အစားအသောက်နှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံးအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ခဲ့n= 16) ။ ဒီတိရစ္ဆာန်အစားအစာနှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံးအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
2.2 ။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြွက် (စံ stereotaxic နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. AAV-GFP, AAV-ΔFosB, ဒါမှမဟုတ် AAV-ΔJunDဖြစ်စေ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် OFC ထိုးလက်ခံရရှိWinstanley et al ။ , 2007) ။ (; ဟင်နရီ Schein, Melville, နယူးယော့ကနေနှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ 100 mg / kg IM) ကြွက် ketamine နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်နှင့်အ xylazine (Ketaset, 10 / ကီလိုဂရမ်အသား (IM) ဆေးထိုး mg) ။ AAVs polyethylene Tube (Instech ရှောလမုန်, Pennsylvania ပြည်နယ်, အမေရိကန်) ကတစ်ဦး Hamilton က microinfusion စုပ်စက်မှပူးတွဲသံမဏိ injector (အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများ, ဖလော်ရီဒါ, အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှန်းတဲ့ 31 သုံးပြီး OFC သို့ထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်တဲ့ stereotaxic Atlas (ထံမှယူအောက်ပါသြဒီနိတ်နှင့်အညီ 0.1 μl / မိနစ်တစ်မှုနှုန်းမှာထုံမွှန်းခဲ့ကြPaxinos နှင့် Watson, 1998): site ကို 1 AP + 4.0, L ကို± 0.8, DV -3.4, 0.4 μl: site ကို2AP + 3.7, 2.0, DV -3.6 ± L ကို, 0.6 μl: site ကို3AP ± 3.2, L ကို± 2.6, DV -4.4, 0.6 μl (တွေ့မြင် (Hommel et al ။ , 2003)) AAV ပြင်ဆင်မှု၏အသေးစိတျအဘို့။ အေပီသတင်းဌာန (anteroposterior) ညှိနှိုင်း, bregma ကနေအီရတ်ကနေ midline နှင့် DV (dorsoventral) ညှိနှိုင်းထံမှ L ကို (lateral) ညှိနှိုင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များဆိုအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်း (စမ်းသပ်မှု 1) သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (စမ်းသပ်မှု 2) စတင်မတိုင်မီခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
2.3 ။ စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း
အဆိုပါ locomotor အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သိမြင်မှု sequelae တိုင်းတာရန်အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီးရီးခံခဲ့သောတိရစ္ဆာန်များမှရရှိသောခဲ့ကြသည်, ထိုဒေတာများကိုယခင်ကထုတ်ဝေခဲ့ကြ (Winstanley et al ။ , 2007) ။ အကျဉ်းများတွင်ကြွက်များဟာ 5CSRT သို့မဟုတ်နှောင့်နှေး-ဝတာဝန်ဖျော်ဖြေဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာထို့နောက်အခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်အဘို့အလိုက်ဖက်အုပ်စုသုံးစုခွဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV2) Over-ဖော်ပြΔFosB (Zachary et al ။ , 2006) ဖြင့်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ဒီပရိုတိန်း၏ induction န်းမှာ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) စံ stereotaxic ခွဲစိတ်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးအုပ်စုတစ်စု၏ OFC သို့ရွေးချယ်ထုံမွှန်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဒုတိယအုပ်စု AAV-ΔJunD၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် OFC တာဟာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ AAV-GFP (အစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း) ကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်သော Post-စစ်ဆင်ရေးအခြေခံတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ပြီးတာနဲ့စူးရှသောကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု (0, 5, 10, 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip) On-အလုပ်တခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ကိုကင်းများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုစူးရှသောကိုကင်းထိတွေ့မှု၏သိမြင်မှုသက်ရောက်မှုပွောငျးလဲရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထို့နောက်နှစ်ခုညီမျှအစုံသို့၎င်းတို့၏ခွဲစိတ်အုပ်စုများအတွင်းနှင့်အကြားနှစ်ဦးစလုံးကိုက်ညီခဲ့သည်။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စု2နေ့ရက်ကာလအဘို့ (15 × 21 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုကင်းနှင့်အတူအခြား, ဆားနှင့်အတူနာတာရှည်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်စဲနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးကုသမှုပြီးနောက်, စူးရှသောကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုများ On-တာဝန်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြသည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ကင်းဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
2.4 ။ ကိုကင်းဖို့ Locomotor တုံ့ပြန်မှု
(San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA မရှိကြောင်းအလေး ထား. ) Locomotor လှုပ်ရှားမှု (25 စင်တီမီတာ× 45 စင်တီမီတာ× 21 စင်တီမီတာ) တစ်ဦး photobeam လှုပ်ရှားမှုစနစ်အား အသုံးပြု. တစ်ဦးချင်းစီလှောင်အိမ်ထဲမှာအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလှောင်အိမ်ထဲမှာ Activity ကို7ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်6စင်တီမီတာမပါဘဲနှင့်3စင်တီမီတာလှောင်အိမ်ကြမ်းပြင်ကနေလှောင်အိမ်ရဲ့ width ကိုဖြတ်ကူး photobeams ။ အဆိုပါဒေတာများကိုယခင် software ကို (ဗားရှင်း 5, San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA) ကို အသုံးပြု.2မိ bins ကျော် collated ခဲ့ကြသည်။ 30 မိပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်း (15 / ကီလိုဂရမ် ip mg) နှင့်တစ်ဦးထပ်မံ 60 မိဘို့စောင့်ကြည့် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။
2.5 ။ mRNA ၏အရေအတွက်
ကြွက်ဟာအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အဘို့အဖော်ပြထားအတိအကျအဖြစ်, 21 အားဖြင့်ဆားသို့မဟုတ်ကင်းနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ဆေးထိုးနောက်တော်သို့လိုက်, AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-ΔFosB၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် OFC ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကနောက်ဆုံးဆားသို့မဟုတ်ကင်းဆေးထိုးပြီးနောက် 24 ဇအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဦးနှောက်လျှင်မြန်စွာထုတ်ယူခဲ့ကြသည်နှင့် NAc ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် 1 မီလီမီတာအထူ 12 gauge လာကြတယ်ရရှိသောနှင့်ချက်ချင်းအေးခဲခြင်းနှင့် RNA အထီးကျန်မှုတွေသည်အထိ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ OFC ကနေလာကြတယ်လည်းဤဒေသအတွက်အောင်မြင်သောဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ထားတဲ့ DNA ကို microarray အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည် (တွေ့မြင် (Winstanley et al ။ , 2007)) အသေးစိတ်ရလဒ်များကိုသည်။ RNA ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီအာအန်အေ Stat-60 ဓါတ်ကူပစ္စည်း (Teltest, ဟူစတန်, တက္ကဆပ်) ကို အသုံးပြု. NAc နမူနာကနေထုတ်ယူခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမူ DNA ကို DNase ကုသမှု (DNA ကို-အခမဲ့, catalog # 1906, Ambion, Austin TX) နဲ့ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ သန့် RNA reverse-ကူးရေးသောခဲ့သည် cDNA (Superscript ပထမဦးစွာကမ်းနားလမ်း Synthesis, Catalog # 12371-019; Invitrogen) သို့။ တစ်ဦး Stratagene (, La Jolla, CA) Mx5000p 96-ကောင်းစွာ thermocycler အပေါ်; အကျိုးစီးပွားမျိုးဗီဇအဘို့အမှူးကို real-time qPCR (အသုံးချ Biosystems, Foster စီးတီး,, CA SYBR အစိမ်းရောင်) ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့ကြသည်။ အားလုံး primer Operon (Huntsville, AL အားဖြင့်ထုံးစံ-ဖန်တီးကြသည် ဟူ. ၎င်း, ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1 ပာများအတွက်) နှင့်စမ်းသပ်ချက်မတိုင်မီ Linear နှင့်တိကျသောအဘို့အတည်ပြု။ အားလုံး PCR ဒေတာကိုအောက်ပါပုံသေနည်းအရသိရသည်ကင်းကုသမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရသည့် glyceraldehyde-3-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (GAPDH) ၏အဆင့်ဆင့်မှပုံမှန်ခဲ့ကြသည်: ΔCt =Ct(အကျိုးစီးပွားမျိုးဗီဇ) - Ct (GAPDH) ။ Adjustments စကားရပ် AAV-ΔFosBနှင့်ကိုကင်းလက်ခံရရှိထားတဲ့ AAV-GFP ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဆငျ့နှင့်အောက်ပါအတိုင်းနာတာရှည်ဆားခံသော AAV-ΔFosBကြွက်, ထို့နောက်ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး (နာတာရှည်ဆားပေးထား AAV-GFP အုပ်စုကို) တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်: ΔΔCt = ΔCt - ΔCt (ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်) ။ လယ်ပြင်၌ကိုထောက်ခံအုကူံအလေ့အကျင့်များနှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်း၌ (Livak နှင့် Schmittgen, 20012:), ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးစကားရပ်အဆင့်ဆင့်အဲဒီနောက်အောက်ပါစကားရပ်ကိုသုံးပြီးတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်-ΔΔCt.
Real-time PCR မှတဆင့် cDNA ၏အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုသော primer ၏ sequence ။
2.6 ။ မူးယစ်ဆေးဝါး
ကိုကင်း HCl (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) 0.9 ml / ကီလိုဂရမ်တစ် volume ထဲမှာ 1% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့် ip ဆေးထိုးမှတဆင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဆေးများဆားအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
2.7 ။ ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဒေတာအားလုံးကို SPSS software ကို (SPSS, ချီကာဂို, IL) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်အတွင်းဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်ဘာသာရပ်များအကြောင်းအချက်များနှင့်အချိန်ဘင်အကြားအဖြစ်နာတာရှည်ကုသမှု (နှစ်ခုအဆင့်နာတာရှည်ဆားနှင့်နာတာရှည်ကိုကင်း): Locomotor data တွေကိုခွဲစိတ်ကုသ (ΔFosBသို့မဟုတ်ΔJunD vs GFP နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်) နဲ့ ANOVA multifactorial အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ နှင့် fixed အချက်များအဖြစ်နာတာရှည်ကုသမှု (နှစ်ခုအဆင့်နာတာရှည်ဆားနှင့်နာတာရှည်ကိုကင်း): Real-time PCR စမ်းသပ်ချက်ကနေဒေတာကိုခွဲစိတ်ကုသမှု (ΔFosB vs GFP နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်) နဲ့ univariate ANOVA အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အဓိကသက်ရောက်မှုလွတ်လပ်သောနမူနာအားဖြင့်ဖွင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် t-tests ဘယ်မှာသင့်လျော်သော။
နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးΔFosBအားဖြင့် mimicked သောစူးရှကိုကင်းများ၏ hyperlocomotor သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့ကိုထုတ်လုပ်
မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအမျှအားကောင်းတဲ့ locomotor ာင်း (ထိုစူးရှသောကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်တိုးချဲ့ hyperactivity ဖေါ်ပြခြင်းကင်းနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ, နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1Aနာတာရှည်ရောဂါကုသ: F1,34 = 4.325, p<0.045) ။ overJunD သည်ΔFosBရန်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်အပျက်သဘောဆောင်သော mutant ဖြစ်သည့် JunD သည်တိရိစ္ဆာန်များကိုအလွန်အမင်းဖော်ပြခြင်းZachary et al ။ , 2006), အ OFC အတွက် (ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1C, ΔJunD vs GFP, အုပ်စုတစု: F1, 56 = 1.509, NS) ။ သို့သော် Over-ဖော်ပြထပ်ခါတလဲလဲဆားထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သော OFC အတွက်ΔFosBတိရိစ္ဆာန်များ "ကြိုတင်-sensitive" ထငျရှားသူတို့နာတာရှည်ကိုကင်းနဲ့ကုသသူတို့ရဲ့ counterparts တွေကိုများ၏ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားသောစူးရှကိုကင်းဖို့မြှင့်တင်ရန် locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသ (သင်္ဘောသဖန်း။ 1B, GFP ΔFosBခွဲစိတ် vs နာတာရှည်ကုသမှု×: F1, 56 = 3.926, p<0.052; ΔFosBတစ်ခုတည်းသာ - နာတာရှည်ကုသမှု - F1,22 = 0.664, NS) ။ ΔFosBတိရိစ္ဆာန်များအတွက် locomotor သေတ္တာထဲမှာထည့်ထားခံရ၏ပထမဦးဆုံး 15 မိ (ΔFosB vs GFP, ခွဲစိတ်အတွင်းအနည်းငယ် hyperactive ခဲ့ကြသည်: F1,56 = 4.229, p <0.04), ဒါပေမယ့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်ကိုကိုမဆိုအုပ်ချုပ်ရေး (ခွဲစိတ်: မတိုင်မီ 15 မိနစ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် F1, 56 = 0.138, NS) ။
ကိုကင်းဖို့ Locomotor ာင်း။ acute ကင်းဆား (panel ကို A) ကိုနှိုင်းယှဉ်ကင်းနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုပိုမိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Over-ဖော်ပြΔFosB (panel ကို B ကို), ထပ်ခါတလဲလဲဆားပေးသောသူတို့အားတိရိစ္ဆာန်များအတွက် (နောက်ထပ် …)
အဆိုပါ 5CSRT စဉ်အတွင်းကင်းပေးသောအခါ, ကြောင်းမစဉ်းစား, တူညီတဲ့တိရိစ္ဆာန်များအချိန်မတန်မီမော်တာတုံ့ပြန်မှုအောင်ထံမှနှိမ်ဖို့အတော်လေးတိုးမြှင့်စွမ်းရည်ကိုပြသ, ဒီ hyperactivity ပုံမှန်အား locomotor ာင်းလေ့လာမှုများတှငျမှတျတမျးတငျထားသောလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြင်နာဆိုလိုသည်မှာလူနာရွေ့လျားဖို့တိကျတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ stimulant တုံ့ပြန်တိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု anxiogenic ပရိုဖိုင်းကိုထင်ဟပ်နိုင်ပေမယ့်တိုင်းတာအဖြစ်, Over-စကားရပ်ΔFosB၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် OFC ဓါတ်လှေကားပေါင်းဝင်္သို့မဟုတ်လွင်ပြင်စမ်းသပ်သုံးပြီးစိုးရိမ်စိတ်တိုးပွားစေပါဘူး (Data ပြမပါ) ။ (ထိုတိရစ္ဆာန်များမှာလည်းအိုင်ပီထိုးဖို့ကောင်းစွာ-habituated ရှိ. , ဆားထိုးသူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲပစ်ဘူးWinstanley et al ။ , 2007), ထို့ကြောင့်ဒီမော်တာအကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ IP ကိုဆေးထိုးဖို့ယေဘုယျတုံ့ပြန်မှုမှစွပ်စွဲမရနိုင်ပါ။ အချုပ်အားဤတွေ့ရှိချက် OFC အတွက်ΔFosB၏ induction ညွှန်ပြ (အတူတူပင်ဒေသတွင်း၌ΔFosBလှုံ့ဆျောမှုနှင့် Impulse အပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုပင်သော်လည်း, ကိုကင်းတုံ့ပြန်ထိခိုက် locomotor များအတွက် (လိုအပ်သောပေမယ့်မဟုတ်) လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်Winstanley et al ။ , 2007).
နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် NAc အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ် modulates
အဆိုပါ NAc အတွက်အထူးသဖြင့်မော်လီကျူးအဆိုပါ AAV-ΔFosBဆား-ကုသအုပ်စုတွင်မြင်ကြ pre-sensitized တုံ့ပြန်မှုမှပံ့ပိုးခဲ့သည်လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံး AAV-GFP အတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်တဲ့အခါမှာဒီတိရစ္ဆာန်များတွင်အလားတူထဲကဓာတုပစ်စညျးတုံ့ပြန်မှုကိုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ် ကိုကင်းနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသ AAV-ΔFosBအုပ်စုများ။ ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုကင်းဖို့ sensitized ကြသည်မဟုတ်အဖြစ်ထို့အပြင်ဆားနှင့်အတူဆကျဆံ AAV-GFP အုပ်စုတွင်တိရိစ္ဆာန်များကိုဤတုံ့ပြန်မှုမပြသင့်ပါတယ်။ ရလဒ်တွေကိုဒီပုံစံသိသိသာသာလွတ်လပ်သောနမူနာအားဖြင့်ထောက်ခံခွဲစိတ်အပြန်အလှန်×သိသိသာသာမူးယစ်ဆေးအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ဟု t-test ထို AAV-GFP ၏နည်းလမ်းနှင့် AAV-ΔFosBဆားကုသအုပ်စုများပေါင်း AAV-ΔFosBနှင့် AAV-GFP ကင်းကုသအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်၏အဓိကသက်ရောက်မှုများ OFC အတွက်နာတာရှည်ကင်းသို့မဟုတ် Over-စကားရပ်ΔFosB၏ NAc အတွက်ပစ်မှတ်မော်လီကျူး modulate နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုမယ်လို့သို့သော်ဤလေ့လာရေးအတွက် AAV-ΔFosBဆားကုသအုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည့် sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုရှင်းပြဖို့မလုံလောက်ဖြစ်ပါသည် ။ AAV-GFP နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိုး၏တာဟာကြောင့်အာအန်အေ၏ထူးထူးခြားခြားအနိမ့်အထွက်နှုန်းမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမရနိုင်တော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် OFC ခံသောတဦးတည်းတိရိစ္ဆာန်ကနေတစ်ရှူး။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျနော်တို့ (ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) ကိုကင်းဖို့ locomotor ာင်း်ပတ်သက်နေခဲ့ကြရာအများအပြားမျိုးဗီဇအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
3.1 ။ ΔFosB / FosB
အဆိုပါ NAc အတွက် FosB mRNA ၏အဆင့်ဆင့် (တစ်ခုခုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးကုသမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲမသင်္ဘောသဖန်း။ 2Aမူးယစ်ဆေးဝါး: F1,14 = 1.179, NS) သို့မဟုတ် OFC (ခွဲစိတ်အတွက်ΔFosB၏စကားရပ်: F1, 14 = 0.235, NS) ။ သို့သော်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်ယခင်အစီရင်ခံစာများ (နှင့်အညီကိုကင်းနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြချန် et al ။ , 1997); သင်္ဘောသဖန်း။ 2Bမူးယစ်ဆေးဝါး: F1,14 = 7.140, p<0.022) ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ OFC တွင် transFosB mRNA ပမာဏသည်ဆားကုသသည့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc တွင်၎င်းကူးယူသည့်အချက်သည်အလွန်အကျွံဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည် (မူးယစ်ဆေးဝါး - F1,14 = 9.362, p<0.011) ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါး×ခွဲစိတ်မှုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းကနာတာရှည်ကိုကင်းကုသမှုသည် AAV-GFP နှင့် AAV-osFosB ကုသသောအုပ်စုများတွင် sameFosB အဆင့်ကိုတူညီသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ F1, 14 = 0.302, NS) ။
အဆိုပါ OFC အတွက် Over-ဖော်ပြတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွင်း mRNA အတွက်အပြောင်းအလဲများ GFP သို့မဟုတ်ΔFosBဖြစ်စေနှင့်ဆားသို့မဟုတ်ကင်းဖြစ်စေနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသ။ ဒေတာများကိုထိန်းချုပ်မှုတန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးအချိုးအစားအဖြစ်စကားရပ်အတွက် linear ခြံအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြသည်။ ပြသဒေတာများဖြစ်ကြသည် (နောက်ထပ် …)
3.2 ။ arc / CREB / PSD95
(ရှိပါတယ်တိုးလာ Arc (လှုပ်ရှားမှု-related cytoskeleton-ဆက်စပ်ပရိုတင်း) စကားရပ် 24 ဇမရှိသက်သေအထောက်အထားများပြီးခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ခဲ့တာမ NAc အတွက် Arc mRNA ၏ OFC ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်အတွက်ΔFosBတိုးပွားလာခဲ့တယျသင်္ဘောသဖန်း။ 2Cမူးယစ်ဆေးဝါး: F1.14 = 1.416, NS, ခွဲစိတ်: F1,14 = 1.304, NS) ။ အလားတူပင်အဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများကို (Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း) ဟူသောအသုံးအနှုနျး (CREB အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2Dမူးယစ်ဆေးဝါး: F1,14 = 0.004, NS, ခွဲစိတ်: F1,14 = 0.053, NS) ။ သို့သျောလညျးကိုကင်းများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးသိသိသာသာ (PSD95 (95 KD ၏ postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်း) အတွက် mRNA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သင်္ဘောသဖန်း။ 2Eမူးယစ်ဆေးဝါး: F1,14 = 11.275, p <0.006), ဒါပေမယ့်ဒီတိုး AAV-GFP နှင့် AAV-osFosB အုပ်စုများ (ခွဲစိတ်ကုသ: နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဆင်တူသည် F1, 14 = 0.680, NS, ခွဲစိတ်×မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 0.094, NS) ။
3.3 ။ : D2/ ဂါဘမြို့သားB/ GluR1 / GluR2
dopamine: D အဘို့အ mRNA ၏အဆင့်ဆင့်2 receptors (နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါတိုးလာသင်္ဘောသဖန်း။ 2Fမူးယစ်ဆေးဝါး: F1,14 = 7.994, p<0.016), သို့သော်ဤတိုး OFC အတွက်ΔFosB၏ Over- စကားရပ် (ခွဲစိတ်ကုသမှု: အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သည် F1, 14 = 0.524, NS, ခွဲစိတ်×မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 0.291, NS) ။ အဆိုပါဂါဘမြို့သား၏ mRNA အဆင့်ဆင့်B အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်မသက်ဆိုင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ခြယ်လှယ် (၏ကင်းဖို့အထပ်ထပ်ထိတွေ့အောက်ပါသေးငယ်တဲ့သေးသိသာထင်ရှားသောပမာဏအနေဖြင့်တိုးမြှင့်အတူအလားတူပရိုဖိုင်းကိုပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 2Gမူးယစ်ဆေးဝါး: F1,14 = 5.644, p <0.037; ခွဲစိတ်ကုသမှု: F1, 14 = 0.000, NS, ခွဲစိတ်×မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 0.463, NS) ။ GluR1 တစ်ခုတိုးလာဘို့အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းသစ်နာတာရှည်ကင်းကုသမှုအောက်ပါရှိခဲ့ပေမယ့်သို့သော် AMPA အချိုမှု receptor subunits GluR2 နှင့် GluR2 ၏အဆင့်ဆင့် (ဆိုကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2H, GluR1: မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 0.285, NS, ခွဲစိတ်: F1, 14 = 0.323, NS, ခွဲစိတ်×မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 0.224, NS, သင်္ဘောသဖန်း။ 2I, GluR2: မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 3.399, p <0.092; ခွဲစိတ်ကုသမှု: F1, 14 = 0.981, NS, ခွဲစိတ်×မူးယစ်ဆေး: F1,14 = 0.449, NS) ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, NAc အတွက်စမ်းသပ်ပြီးသည့်မျိုးဗီဇတစ်ခုအရေအတွက် mRNA အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနာတာရှည်ကင်းကုသမှုပေမယ့်, ငါတို့ Over-ဖော်ပြသည့် OFC အတွက်ΔFosBဆား-ကုသကြွက်များတွင်ဤမျိုးဗီဇ၏စကားရပ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုးမမြင်ရ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်ဤအထူးသဖြင့်မျိုးဗီဇဒီအုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့ locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏လုပ်ရပ်များန်းမှာ, ကိုကင်းများ၏ locomotor လှုံ့ဆော်လုပ်ရပ်များဖို့ OFC sensitized ကြွက်များတွင် Over-စကားရပ်ΔFosB၏ဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့ယခင်ကဤ 5CSRT အပေါ်တူညီတဲ့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှောင့်နှေး-ဝ Paradigm များ၏စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းစူးရှသောကိုကင်းကြောင့်ထိခိုက်, နှင့်အလားတူသည်းခံစိတ်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ရပ်များထိခိုက်မခံတဲ့နဲ့သည်းခံစိတ်အတူတူပင်ဦးနှောက်ကိုဒေသတွင်း၌သရုပ်ဆောင်, တူညီတဲ့မော်လီကျူး, ΔFosBမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံး adapter နဲ့, တူညီတဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုတည်း frontocortical locus မှာကိုကင်းများအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတဦးတည်းန်းမှာအားဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ sequelae အတွက် cortical ဒေသများ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့ပြင်ဤဒေတာကိုသည်းခံအရေးကြီးတဲ့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုထင်ရသော contrast, သေးရငျးနှီးဆက်စပ်, ရှုထောင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBစကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းပေးထား locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်သည်တဦးတည်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ယူဆချက်ကြောင့် Over-ဖော်ပြΔFosBအဆိုပါ OFC အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကိုကင်းမှတိရိစ္ဆာန်များကို pre-sensitizes အတွက်ပါပြီလိမ့်မယ်။ သို့သော်ပြောင်းပြန်ရလဒ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်: အ NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့် Over-ဖော်ပြသည့် OFC အတွက်ΔFosBတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြသည်။ ဤဒေသတွင် Over-စကားရပ်ΔJunD၏ΔFosBရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုမှတဆင့်ဟန့်တားကြွက်တွေမှာကိုကင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအများအပြားလျော့ကျစေပါတယ်အဖြစ် NAc ΔFosB၌ဤကျဆင်းခြင်း၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ (အနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲရှိပါတယ်Peakman et al ။ , 2003) ။ အခြို့သောမျဉ်းပြိုင်သောဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် dopamine system ကိုရည်ညွှန်းထားသောသူတို့အားအကြားတည်ရှိနေ။ ဤဒေသတွင် dopamine agonists ၏လျှောက်လွှာကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဥပမာ, NAc အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dopamine တွေပျက်စီးမှု (hyperactivity ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်Bachtell et al ။ , 2005; Costall et al ။ , 1984; ပါကင် et al ။ , 2002; Winstanley et al ။ , 2005b) ။ အလားတူပင်ΔFosB၏ cortical အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် subcortical စကားရပ်လျော့ကျစေခြင်းငှါအချက်ကို prefrontal dopaminergic ဂီယာတစ်ခုတိုးမကြာခဏ (striatal dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြန်အလှန်ကျဆင်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းရှာဖွေမတွေ့ရှိရေတွင်း-ထူထောင်ဆင်တူDeutch et al ။ , 1990; မစ်ချယ်နှင့် Gratton, 1992) ။ ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆယ်လူလာပြ molecules တွေအတွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါလက်ရှိမသိရသေးပေမယ့်ဗီဇကူးယူအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြို့သောအာရုံခံကွန်ရက်များ၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ, OFC အတွက်ΔFosBတိုးပွားလာသည့်ဂါဘမြို့သားများအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်ဒေသခံ inhibitory လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု upregulation မှဦးဆောင်A အဲဒီ receptor, mGluR5 အဲဒီ receptor နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို, microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ် (Winstanley et al ။ , 2007) ။ OFC လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဤပြောင်းလဲမှုထို့နောက်အလှည့်အတွက်ΔFosB၏စကားရပ်များတွင်ဒေသခံတစ်ဦးအပြောင်းအလဲကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်းသောအခြားဦးနှောက်ဒေသများအတွက်လှုပ်ရှားမှုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ΔFosB၏အဆင့်ဆင့် dopamine လှုပ်ရှားမှုထဲမှာဆွေမျိုးပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးအချက်ကိုခိုင်လုံသည့်ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ (တိုးလာပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်၏ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်နာတာရှည်ကင်းကုသမှုအပြီးတွင် NAc အတွက်ΔFosB mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်ချန် et al ။ , 1997; et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1992; Nye et al ။ , 1995) ။ သို့သော်မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာသိသိသာသာတိုး (နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 24 ဇလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ΔFosB mRNA ၏အဆင့်ဆင့်, နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုပြီးနောက်မရှိတော့သိသိသာသာမြင့်မားသော3ဇကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်Alibhai et al ။ , 2007) ။ ဤသည်ကွာဟမှုကြောင့် (စိတ်ကြွဆေး vs ကိုကင်း) အသုံးပြုတဲ့ psychostimulant မူးယစ်ဆေးအတွက်ခြားနားချက်မှဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်ကင်း၏တိုတောင်းဝက်အသက်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးလျှင်မြန်စွာစိတ်ကြွဆေးများထက်ပုံမှန်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါလိမ့်မယ်, အစားအပြန်အလှန်ထက်။ ဤမတူညီသောရလဒ်များကိုများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုသောယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အကြောင်းပြချက်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတိရိစ္ဆာန်များ 21 ရက်ပေါင်း (အဘို့တစ်ခုတည်းမြင့်မားသောထိုးဆေးထိုးနှိုင်းယှဉ်7နေ့ရက်ကာလအဘို့နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုအလယ်အလတ်ထိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြကြောင်းAlibhai et al ။ , 2007) ။ ကုသမှုပိုမိုတိုးချဲ့ regimen ကဒီမှာလေ့လာတွေ့ရှိပိုမိုသိသာသောအပြောင်းအလဲအတွက်ရလဒ်နိုင်တယ်။
နာတာရှည်ကင်းအောက်ပါ NAc အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာဗီဇစကားရပ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုယခင်ကအစီရင်ခံတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ယေဘုယျသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏သော်လည်းဆိုးကျိုးများ၏ပြင်းအားလက်ရှိလေ့လာမှုမှာသေးငယ်သည်။ ဒီတစျခုမှာအလားအလာရှိသောအကြောင်းပြချက်လေ့လာမှုအများစုကနောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ကတည်းကနှစ်ပတ်ရရှိသောတစ်ရှူးကိုသုံးခဲ့ကြသော်လည်းတိရစ္ဆာန်ကိုကင်း၏နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်မှသာ 24 ဇယဇျပူဇျောခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းအချိန်-သင်တန်းရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာရေးနှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇ / ပရိုတိန်းစကားရပ်တွင်ပိုမိုသိသာသောအပြောင်းအလဲကဒီနောက်ပိုင်းမှာအချိန်-Point မှာလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်ကဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့က dopamine: D အဘို့အ mRNA အတွက်အနည်းငယ်တိုးလာသတင်းပို့ပေမယ့်2 အဆိုပါ NAc အတွက်အဲဒီ receptor, အထွေထွေသဘောတူသည့် D ၏စကားရပ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်2 သို့မဟုတ်: D1 အဲဒီ receptor အပြီးအပိုင်: D အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးနှင့်လျှောက်လျော့နည်းသော်လည်း, locomotor အကဲဆတ်ခြင်းတွင်အောက်ပါဖှံ့ဖွိုးတိုးပြောင်းလဲကြသည်မဟုတ်2 အဲဒီ receptor အရေအတွက်ကမကြာမီ၎င်းအထိခိုက်မခံစစ်အစိုးရ (တွေ့မြင် (၏အဆုံးပြီးနောက်အစီရင်ခံခဲ့ကြပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997)) ဆွေးနွေးမှုသည်။ GluR1 နှင့် GluR2 mRNA ဒီအစောပိုင်းအချိန်-Point မှာနာတာရှည်ကင်းကုသမှုအောက်ပါမပြောင်းလဲခဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေးယခင်အစီရင်ခံစာနှင့်အညီထိုနည်းတူဖြစ်ပါသည် (Fitzgerald et al ။ , 1996), GluR1 mRNA တစ်ခုတိုးနာတာရှည် psychostimulant ကုသမှု၏ချုပ်ရာအပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အချိန်-အချက်များမှာရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း (Churchill ၏ et al ။ , 1999).
သို့သော်ကျနော်တို့ကိုကင်းနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက် PSD95 mRNA အတွက်သေးငယ်တဲ့တိုးစောငျ့ရှောကျခဲ့တယျ။ PSD95 တစ်ဦးငြမ်းမော်လီကျူးဖြစ်ပြီး, excitatory synapses ၏ postsynaptic သိပ်သည်းဆအတွင်းအဓိကပရိုတိန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ (ထို synapses မှာအများအပြားအချိုမှု receptors နှင့်ဆက်စပ်ပြပရိုတိန်း anchors နှင့် PSD95 စကားရပ်တစ်ခုတိုးတိုးချဲ့ Synaptic လှုပ်ရှားမှုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ထင်နှင့် synapses မှာအချိုမှု receptors ၏ insertion နှင့်တည်ငြိမ်တိုးပွါးဗန် Zundert et al ။ , 2004) ။ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် PSD95 တစ်အခန်းကဏ္ဍ (ယခင်ကအကြံပြုထားသည်Yao အဘိဓါန် et al ။ , 2004).
Arc စကားရပ်ထဲမှာတိုးလည်း Synaptic လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးချိတ်ဆက်ပြီ။ သို့သော် NAc အတွက် Arc စကားရပ်တစ်ခုတိုး (စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူဆေးထိုးပြီးနောက် 50 မိလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်စဉ်Klebaur et al ။ , 2002Arc အတွက်တိုးမြှင့်လက္ခဏာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူနာတာရှည်ထိုးပြီးနောက် 24 ဇစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ (ကိုကင်းများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုပိုပြီးအမြဲတမ်း NAc အတွက် Arc upregulate တော်မမူကြောင်းညွှန်ပြLarsen et al ။ , 2007) နှင့်စိတ်ကြွဆေး (Ujike et al ။ , 2002) ။ CREB phosphorylation တစ်ခုတိုးလည်း (စူးရှသောကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် NAc အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်Kano et al ။ , 1995; Konradi et al ။ , 1994; ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1998), ဒါပေမယ့် CREB mRNA မတိုးနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ဖြစ်ကောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ CREB လမ်းကြောင်းမှတဆင့်အချက်ပြ (ထိုကဲ့သို့သောΔFosBအဖြစ်ကူးယူအချက်များစွဲဖြစ်စဉ်များအဖြစ်လွှမ်းမိုးလာမယ့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေ၏ကနဦးအဆင့်တွင်ပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်ထင်နေသည်McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ CREB ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးဖြစ်သော်လည်း (Carlezon et al ။ , 1998ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ပေမယ့်), CREB ၏ endogenous ကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာရန်အတွက်တိုးတိုးပွားလာ CREB စကားရပ် locomotor ာင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိအစီရင်ခံစာများရှိပွီဟုသွေးဆောင်စခန်းအစောပိုင်း repressor ပရိုတိန်းသို့မဟုတ် ICER, (စိတ်ကြွဆေး၏စူးရှသောဆေးထိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ hyperactivity တိုးပွါးအစိမ်းရောင် et al ။ , 2006).
ကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများအများစုစာပေကနေခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ Concorde များမှာပေမယ့်အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့ကုသဆေးကဲ့သို့ပင်ထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိရတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာကင်းဖို့ထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သည့် NAc အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်မဆိုအပြောင်းအလဲများကိုမတှေ့ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် OFC AAV-ΔFosBအတူ။ ဒါက OFC အတွက်ΔFosBတိုးပွားလာကဒီမှာလေ့လာခဲ့ဘဲ, များစွာသောအခြားဗီဇပေမဲ့, အ NAc မှတဆင့်မော်တာာင်းထိခိုက်မရစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်, ဖြစ်နိုင်သည်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများကို (medial prefrontal cortex (mPFC) ၏မော်ဂျူ striatal လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲဖြင့် psychostimulants မှအမူအကျင့်ာင်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ကိုအကြံပြုSteketee, 2003; Steketee နှင့် Walsh, 2005), လျော့နည်း OFC တူသောပိုပြီး ventral prefrontal တိုင်းဒေသကြီးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်ပေမယ့်။ အဆိုပါ NAc (ထို OFC ကနေတချို့ပရိုဂျက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံBerendse et al ။ , 1992) ။ သို့သော်တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီနှင့်အသေးစိတ်လေ့လာမှုအနည်းငယ်တိုက်ရိုက် OFC-NAc စီမံချက်များဖော်ထုတ်: အ NAc shell ကို၏အများဆုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စုတစုကျဲတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဟာ OFC များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် ventrolateral ဒေသများသို့ anterograde tracer ၏အောက်ပါထိုးကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်, ထိုအများဆုံး ventral OFC ခဲ့သည် ဒေသ (ထို NAc core ကိုမှအနည်းငယ်မျှသာစီမံချက်များပို့ပေးSchilman et al ။ , 2008) ။ ဗဟို caudate-putamen အများကြီးသိပ်သည်း innervation လက်ခံ၏။ ဒီခန္ဓာဗေဒအထောက်အထားအလငျး၌ကျွန်ုပ်တို့၏ PCR တုံ့ပြန်မှုအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် NAc တစ်ရှူးများ၏အများစုတိုက်ရိုက်ဗီဇစကားရပ်များတွင်မဆိုအပြောင်းအလဲများအောင်မြင်စွာတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့ကျလာသည် OFC အားဖြင့် innervated ခဲ့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါ OFC ထိုကဲ့သို့သော mPFC, basolateral amygdala (BLA), caudate putamen နှင့် subthalamic နျူကလိယ (STN) အဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြင်းထန်စွာ NAc နှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအရာဒေသများမှအကြီးအကျယ်စီမံကိန်းကိုပါဘူး။ အဆိုပါ OFC ပြောင်းလဲမှုများသွယ်ဝိုက်သောဤဒေသများအတွက်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေတဆင့် NAc ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ modulate နိုငျမလားဆိုတာပွင့်လင်းမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ (ဒါဟာ BLA အတွက်လှုပ်ရှားမှု OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲနေသည်ပြသခဲ့ပြီး, ဤသိသိသာသာ OFC ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်လိုငွေပြမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ပြုလုပ်Stalnaker et al ။ , 2007), ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော NAc အဖြစ်ဒေသများအတွင်းမည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိသေးပါကဖော်ပြခဲ့သည်ခံရဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် OFC နှင့်အရာကိုလည်းအကြီးအကျယ်မော်တာထိန်းချုပ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်ချိတ်ဆက်ထားသောအခြားဒေသတွေမှာအပေါ်အာရုံစိုကျဖို့ပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ STN ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြုပါနှင့် OFC (Impulse နှင့် Pavlovian သင်ယူမှုအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်မသာအဖြစ် STN တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလားအလာပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်Baunez နှင့် Robbins, 1997; Chudasama et al ။ , 2003; Uslaner နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2006; Winstanley et al ။ , 2005a), ဒါပေမယ့် psychostimulant-သွေးဆောင် locomotor ာင်း (ဒီဒေသမှာရှိတဲ့က c-Fos စကားရပ်တစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်သည်Uslaner et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါ OFC အတွင်းဗီဇစကားရပ်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများ STN တူသောမြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်ဘယ်လိုစုံစမ်းဖို့ဒီဇိုင်းအနာဂတ်စမ်းသပ်ချက်မျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။ အဆိုပါ OFC ကိုလည်း (ထို ventral tegmental ဧရိယာမှအသေးစား projection ပို့ပေးGeisler et al ။ , 2007), locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဒေသ။ ဒါဟာ Over-စကားရပ်ΔFosB၏ OFC သို့ဖြစ်. ဒီလမ်းကြောင်းမှတဆင့် locomotor ာင်းသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သိမြင် function ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့် locomotor ာင်းအကြားဆက်ဆံရေးအတိအကျသဘောသဘာဝသည်လက်ရှိတွင်မသိရသေး, ငါတို့သည်ဒါဝေး OFC အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ဤအတွေ့ရှိချက်ပေးသောကြောင့်အခြားအဦးနှောက်ဒေသများတွင် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ်ဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများအပြန်အလှန်ကင်းဖို့သိမြင်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အချို့သောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားဆက်စပ်မှုတွေစူးစမ်းလေ့လာရာစမ်းသပ်မှုစွဲပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်ထိန်းသိမ်းထားလျက်, အပြန်အလှန်အခန်းကဏ္ဍဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အာရုံခံစားမှုနှင့်သည်းခံစိတ်အားဖြင့်ကစားနေသည်မည်သို့အသစ်ကအလင်းကိုသွန်းစေနိုင်သည်။
American Psychiatric Association ။ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် IV "။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association; 1994 ။
Bachtell RK, Whisler K ကို Karanian: D, ကိုယ်ပိုင် DW ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နျူကလိယ၏သက်ရောက်မှုများကြွက်များတွင်ကင်း-ဆည်းပူးနေနှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေအပေါ် dopamine agonists နှင့်ရန်၏ shell ကိုအုပ်ချုပ်ရေး accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 2005;183: 41-53 ။ [PubMed]
Baunez ကို C, Robbins TW ။ အဆိုပါ subthalamic နျူကလိယ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်မျိုးစုံလိုငွေပြမှုသွေးဆောင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1997;9: 2086-99 ။ [PubMed]
Bechara အေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံး: တစ် neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1458-63 ။ [PubMed]
Berendse HW, Galis-de Graaf Y ကို, Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင် prefrontal corticostriatal စီမံကိန်း၏ ventral striatal အခန်းနှင့်အတူမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို comp Neurol ။ 1992;316: 314-47 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr, et al ။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ။ 1998;282: 2272-5 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ ။ နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင် deltaFosB ၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 4933-41 ။ [PubMed]
et al Chudasama Y ကို။ ရွေးချယ်မှု, Impulse နှင့် compulsive အပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ: ကြွက်များတွင် dorsal anterior cingulate, infralimbic နှင့် orbitofrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ5ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် Dissociable ရှုထောင့်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003;146: 105-19 ။ [PubMed]
Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 2488-93 ။ [PubMed]
Costall B, Domeney လေး, Naylor RJ ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏နျူကလိယ accumbens သို့ dopamine ပြုတ်ရည်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Locomotor hyperactivity: လုပ်ဆောင်ချက်သတ်မှတ်ချက်။ Psychopharmacology (Berl) 1984;82: 174-180 ။ [PubMed]
Deutch AY, Clark က WA, Roth RH အ။ Prefrontal cortical dopamine လျော့ကျစိတ်ဖိစီးမှုမှ mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏တုန့်ပြန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1990;521: 311-5 ။ [PubMed]
Fitzgerald LW, Ortiz J ကို, Hamedani AG က, Nestler EJ ။ Cross-sensitive အေးဂျင့်များအကြားဘုံအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်: အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ GluR1 နှင့် NMDAR1 အချိုမှု receptor subunits ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုတိုးမြှင့်။ J ကို neuroscience ။ 1996;16: 274-82 ။ [PubMed]
Garavan H ကို, Hester R. ကင်းမှီခိုအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropsychol ဗျာ 2007;17: 337-45 ။ [PubMed]
Geisler S က, Derst ကို C, Veh RW, Zahm DS ။ ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Glutamatergic afferents ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 5730-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al အစိမ်းရောင်က TA ။ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးများကနျူကလိယ accumbens အတွက် ICER ထုတ်ဖော် induction စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 8235-42 ။ [PubMed]
Hanson KL, Luciana M က, Sullwold K. ဆုကြေး-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှုနှင့်မြင့်မားသော Impulse MDMA နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြား။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008
Hommel JD, Sears RM, Georgescu: D, Simmons DL, DiLeone RJ ။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated RNA ်ရောက်စွက်ဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်အတွက်ဒေသခံဗီဇ knockdown ။ နတ် Med ။ 2003;9: 1539-44 ။ [PubMed]
B က, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992;89: 5764-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jentsch JD, တေလာ JR ။ ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharmacology ။ 1999;146: 373-90 ။ [PubMed]
Kalivas PW, မော်တာလှုပ်ရှားမှု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ Stewart ကဂျေ Dopamine ဂီယာ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1991;16: 223-44 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162: 1403-13 ။ [PubMed]
Kano T က, ဆူဇူကီး Y ကို, Shibuya M က, Kiuchi K ကို Hagiwara အမ်ကင်း-သွေးဆောင် CREB phosphorylation နှင့်က c-Fos စကားရပ် Parkinson မော်ဒယ်ကြွက်များတွင်နှိမ်နင်းလျက်ရှိသည်။ NeuroReport ။ 1995;6: 2197-200 ။ [PubMed]
Karler R ကို, Calder ld, Bedingfield JB ။ ကိုကင်းအပြုအမူာင်းနှင့် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်။ Psychopharmacology (Berl) 1994;115: 305-10 ။ [PubMed]
et al Kelz ကို MB ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999;401: 272-6 ။ [PubMed]
et al Klebaur je ။ ကို arc ကျလာသောမှစိတ်ကြွဆေးများ၏စွမ်းရည် (Arg 3.1) ကို caudate အတွက် mRNA စကားရပ်, နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်ခြင်းဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2002;930: 30-6 ။ [PubMed]
Konradi ကို C, ကိုးလ် RL, Heckers S က, Hyman SE ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားကူးယူအချက် CREB မှတဆင့်ကြွက် striatum အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 1994;14: 5623-34 ။ [PubMed]
Larsen MH, Rosenbrock H ကို, Sams-Dodd က F, Mikkelsen JD ။ ဦးနှောက်၏ expression neurotrophic အချက်, လှုပ်ရှားမှု-စညျးမဉျြးစညျးကမျး cytoskeleton ပရိုတိန်း mRNA နှင့်, သုံးဆ monoamine Re-လွှာမှ inhibitor tesofensine နှင့်အတူကုသမှုနှင့်နာတာရှည်-နာတာရှည် Sub ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal neurogenesis ၏တိုးမြှင်ဆင်းသက်လာ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2007;555: 115-21 ။ [PubMed]
Lejuez CW, Bornovalova MA, သမီး SB, Curtin JJ ။ အတွင်းစိတ်-မြို့အက်ကွဲ / ကင်းအသုံးပြုသူများနှင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူများသည်အကြား Impulse နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005;77: 169-75 ။ [PubMed]
Livak KJ, Schmittgen TD ။ နည်းလမ်းများ။ vol ။ 25 ။ San Diego မှ, ကာလီဖိုးနီးယား: 2001 ။ Real-time အရေအတွက် PCR နှင့်2(-Delta မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို C (T)) method ကိုသုံးပြီးဆွေမျိုးဗီဇစကားရပ်အချက်အလက်များ၏ analysis; စစ။ 402-8 ။
McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် deltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 1208-15 ။ [PubMed]
Mitchell က JB, အ prefrontal cortex ၏ Gratton အေတစိတ်တပိုင်း dopamine လျော့ကျသဘာဝကျကျလှုံ့ဆော်မှုအားဖြည့်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းတိုးမြှင် mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်စေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1992;12: 3609-18 ။ [PubMed]
et al Moeller အပြည်ပြည်သွား။ လျှော့ချ anterior Corpus callosum အဖြူကိစ္စသမာဓိရှိကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်တိုးမြှင့် Impulse နှင့်လျှော့ချခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်: ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 610-7 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: deltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc လန်ဒန်, B, Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3245-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nye သူ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Kelz ကို MB, Iadarola M က, Nestler EJ ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995;275: 1671-80 ။ [PubMed]
et al ပါကင်ဂျာ။ နျူကလိယ dopamine လျော့ကျဝယ်ယူခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်း accumbens: mesoaccumbens dopamine function ကိုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002;137: 149-63 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Watson ဟာ C. stereotaxic Co-ထုံးအဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်။ ဆစ်ဒနီ: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
et al Peakman MC ။ Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏သွေးဆောင်, ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003;970: 73-86 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သော psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏တစ်ဦးက circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997;25: 192-216 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993;18: 247-91 ။ [PubMed]
et al ရော်ဂျာ RD ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;20: 322-39 ။ [PubMed]
Schilman EA ၏, Uylings HB, Galis-de Graaf Y ကို, ယောလ: D, Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင်အဆိုပါ Orbital cortex မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ caudate-putamen ရှုပ်ထွေးသော၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းမှမှန်းချက်ရဲ့။ neuroscience လက်တ။ 2008;432: 40-5 ။ [PubMed]
Schoenbaum, G, Roesch MR, Stalnaker က TA ။ Orbitofrontal cortex, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006;29: 116-24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ relapse အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်စခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1998;18: 1848-59 ။ [PubMed]
Stalnaker က TA, ဖရန့် TM, Singh က T က, Schoenbaum G. အ Basolateral amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည် orbitofrontal-မှီခိုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ချို့ယွင်းဖျက်သိမ်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007;54: 51-8 ။ [PubMed]
Steketee JD ။ အဆိုပါ medial prefrontal c006Frtex ၏ Neurotransmitter စနစ်များ: psychostimulants ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2003;41: 203-28 ။ [PubMed]
Steketee JD, Walsh တီဂျေ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex သို့ sulpiride ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိုးကြွက်များတွင်ကင်းထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ပေါ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2005;179: 753-60 ။ [PubMed]
Ujike H ကို, Takaki က M, Kodama က M, synaptogenesis, neuritogenesis နှင့် psychostimulants မှအမူအကျင့်ာင်းအတွက်မြေပုံ kinase နှင့်ဆက်စပ်သော Kuroda အက်စ် Gene စကားရပ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2002;965: 55-67 ။ [PubMed]
Uslaner JM, Crombag HS, ဖာဂူဆန်သည် SM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ထိုး၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အထပ်ထပ်ကုသမှု: ကင်း-သွေးဆောင် psychomotor လှုပ်ရှားမှုဟာ subthalamic နျူကလိယအတွင်းက c-fos mRNA စကားရပ်သွေးဆောင်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003;17: 2180-6 ။ [PubMed]
Uslaner JM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ Subthalamic နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထကြွလွယ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောရှေးခယျြမှုလျော့ချ - တိုးမြှင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ? EUR J ကို neuroscience ။ 2006;24: 2345-54 ။ [PubMed]
ဗန် Zundert B, Yoshii တစ်ဦးက, အချိုမှု synapses မှာကွန်-Paton အမ် receptor compartmentalization နှင့်လူကုန်ကူး: တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2004;27: 428-37 ။ [PubMed]
Verdejo-Garcia က AJ, Perales JC, ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ polysubstance ချိုးဖောက်ဖာရ-Garcia ကအမ်သိမှု Impulse ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2007;32: 950-66 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 318-25 ။ [PubMed]
et al Winstanley, CA ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးလာ Impulse: အ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb Cortex ။ 2008 ဇွန် 6; ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ဝေ။
Winstanley, CA, Baunez ကို C, Theobald DE, Robbins TW ။ အဆိုပါ subthalamic နျူကလိယကျဆင်းခြင်းထကြွလွယ်သောရှေးခယျြမှုမှတွေ့ရှိရပါသည်ဒါပေမယ့်ကြွက်များတွင် autoshaping အယှက်: Pavlovian အေးစက်နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အတွက် Basal ganglia ၏အရေးပါမှုကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005a;21: 3107-16 ။ [PubMed]
Winstanley, CA, Theobald DE, Dalley JW, Robbins TW ။ ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုများထိန်းချုပ် serotonin နဲ့ dopamine အကြားအပြန်အလှန်: ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များအတွက်ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005b;30: 669-82 ။ [PubMed]
et al Winstanley, CA ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10497-507 ။ [PubMed]
ME Wolf ။ psychomotor စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းအတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ prog Neurobiol ။ 1998;54: 679-720 ။ [PubMed]
et al Yao အဘိဓါန် WD ။ dopamine-mediated Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity တစ်ဦးထိန်းညှိအဖြစ် PSD-95 ၏ identification ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004;41: 625-38 ။ [PubMed]
et al Zachary V ကို။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 205-11 ။ [PubMed]